Saram-pisoratana anarana sy saram-pianarana EPP: Maimaimpoana hoy ny Lalampanorenana
jeudi, 07 novembre 2019 08:39
Misy ve ny saram-pisoratana anarana any amin'ny ambaratonga fototra na EPP miankina amin'ny fanjakana?
Misy ve ny saram-pianarana, na izay hiantsoana azy hoe FRAM?
Sa ny Filoham-pirenena amin'ny volany manokana na miantoka azy manerana ny Nosy?
Tsy mpanao asa soa ny Filoham-pirenena, fa Filohan'ny Malagasy rehetra, ka tsy maintsy mitovy ny atao amin'ny zaza Malagasy rehetra. Afaka mandeha tsikelikely raha tsy araka ny an'ny rehetra miaraka, fa atao mazava ny programa sy ny fotoana hoe, ny an'ny sekoly izao, amin'ny datin'izao, ny an'ny atsy kosa dia amin'izao.
Raha tsiahivina ny voalazan'ny Lalampanorenana
"Andininy 24.- Mandamina fanabeazam-bahoaka maimaimpoana sy takatry ny rehetra hidirana ny Fanjakana. Ny fampianarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy ataon’ny rehetra."
Izany hoe, maimaimpoana ny fampianarana ambaratonga voalohany satria didin'ny fanjakana mihitsy ny ampianarana ny zaza, tokony hisy sazy izany ho an'izay tsy mampiana-janaka. Rehefa ny fanjakana no mandidy hoe tsy maintsy atao, dia izy no miantoka, ary mampiasa ny herim-panjakana rehetra hanerena ny ray aman-dreny sy ny zaza hianatra farafaharatsiny eo amin'ny ambaratonga voalohany, ary mazava io hoe maimaimpoana.
Ka na saram-pisoratana anarana io, na manana FRAM na mpampianatra ilay sekoly EPP sy ny ambaratonga voalohany, dia ny fanjakana no miantoka an'izany, fa maimaimpoana ny fampianarana ambaratonga voalohany.
Tsy fanajana Lalampanorenana ny fampandoavana 1 ariary ny mpianatra rehetra eny amin'ny EPP sy ny ambaratonga voalohany manerana ny Nosy.